एक गन्तव्यहरू बीच छोटो दूरी दिइएको अपेक्षा थियो रूपमा यी रेलका छैन बारम्बार रूपमा छन्. तिनीहरूले सामान्यतया हरेक घण्टा एक पटक चलाउन, तर यो समय समयमा भिन्न हुन सक्छन्. तथापि, यसलाई आफ्नो टिकट खरिद गर्दा थप जानकारी को लागि सोध्नु राम्रो सधैं छ. यो को अनुसूची र यात्रा समय थाह बाहेक रेल मार्ग, यसलाई आफ्नो टिकट मान्य गर्न महत्वपूर्ण छ. त्यहाँ रेल मञ्चहरूमा तपाईंले प्रयोग गर्न सक्ने मा प्रमाणीकरण मिसिन छन्. तपाईं के गर्न छ सबै साना पहेलो मिसिन को स्लट मा टिकट को साँघुरो अन्त घुमाउन र टिकट सुन्न प्रतीक्षा छ.
Riomaggiore या त पहिलो बिसौनी हुनेछ (यदि तपाईं लास्पेजीया देखि लाग्यौं छन्) वा पाँचौ स्टप (यदि तपाईं Levanto देखि लाग्यौं छन्). तथापि, यो सम्भवत धेरै Cinque Terre आगंतुकों लागि पहिलो स्टप हुन जाँदै छ, यसलाई त्यहाँ प्राप्त गर्न सबैभन्दा छिटो तरिका हो देखि. Riomaggiore पाँचवटा गाउँ को सबै भन्दा ठूलो छ, मुख्य पार्क कार्यालय छ देखि र यो अनौपचारिक राजधानी छ. को भवनहरु ठाडो गहिरो सारा बैठे छन्, साना बन्दरगाहसम्म सबै तरिका. प्यास्टेल घरहरू peeling को दृश्य सुरम्य छ र सधैंभरि आफ्नो स्मृति मा रहन हुनेछ. यो सूर्यास्त मा हेर्न एक शानदार दृष्टि छ, र यो जोडे विशेष क्षण बाँड्न चाहन्छौं कि लागि एक हेर्न पर्छ छ.
प्रत्येक पाँचवटा गाउँमा एक निश्चित आकर्षण छ. यो Waterfront मा छैन देखि Corniglia विशेष छ. तथापि, यो समुद्र तट मा के अभाव, यो भन्दा बढी यसको आफ्नै अद्वितीय सौन्दर्य संग अप बनाउँछ. कोर्निगिलिया भन्दा धेरै टाढाको महसुस गर्दछ अन्य गाउँहरु. तथापि, यो एक थप आराम र स्थानीय वातावरण प्रदान गर्दछ. गाउँमा अक्सर यसको कठिन ट्रेल्स लागि अनदेखी छ. डुङ्गाबाट पुग्न सकिन्छ कि अन्य गाउँमा विपरीत, Corniglia पहाडलाई माथि छ र कुनै समुद्र पहुँच छ. यसलाई पुग्न मात्र तरिका गर्न Cinque Terre बाटो वा पदयात्रा छ रेल लिन. तथापि, यो रेल तपाईं कुनै पनि शारीरिक प्रयास छोडूँगा कि टिप्पणी गर्न आवश्यक छ. गाउँको केन्द्रमा पुग्न र सानो गाउँले प्रस्ताव राखेका सबै चीज हेर्न तपाईं अझै पनी सीढीहरू हिड्नुपर्नेछ.
कोर्निग्लियासँग एक छ शानदार दृष्टिकोण यसले तपाईंलाई वरपरका पहाडहरू र विशाल समुद्रहरूको अधिकांश देख्न दिन्छ. गाउँमा मा Belvedere जाने र Cinque Terre को सौन्दर्य मा लिन ठूलो ठाउँ छ. एक पटक तपाईं स्वाद गाउँमा प्रस्ताव आनन्द उठाउन सक्छौं त्यसो, स्वादिष्ट रक्सी गर्न अचम्मको pesto देखि. Corniglia रक्सी बनाउने एक धनी इतिहास छ, र तपाईं स्थानीय मित्रता गाँस्न भाग्यशाली पर्याप्त छन् भने, तपाईं स्वाद र आफ्नो मदिरा बारेमा सिक्न सक्छ.
Vernazza मात्र Cinque Terre छैन मा सबै भन्दा सुन्दर गाउँको रूपमा मानिन्छ, तर इटाली को सम्पूर्ण देश. यो निश्चय पनि यात्रा प्रेम धेरै गिरावट बनाउँछ कि Cinque Terre को crowning jewel छ. यो अन्य गाउँमा कमी एक थप सुरुचिपूर्ण र परम्परागत महसूस छ. को असाधारण खाना र सुन्दर ठाँउहरु संग संयोजन, र तपाईं दोस्रो यात्रा ग्यारेन्टी एक स्थान प्राप्त. बनाउन Vernazza मा जब Doria महल भ्रमण गर्न निश्चित. यसलाई पहिले गाउँमा दशक को मान्छे सुरक्षित अन्तिम मूल टावर को एक समावेश.
Monterosso अल Mare पक्कै पनि Cinque Terre मा शहर जस्तै सबैभन्दा touristy र रिसोर्ट छ. यो कार छ, होटल र कंकड तटों पर्यटकहरुका लागि उत्तम. तपाईं इटाली को यो अचम्मको भाग भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तर बढि आधुनिक अनुभूति रुचि, त्यसपछि Monterosso लागि छ. Monterosso साँझ strolls लागि पूर्ण छ कि एक विचरण छ, र अझ राम्रो, तिनीहरूले जो कोहीले आनन्द समुद्री गर्नेछ ठीक भोजन छ.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “द्रुत गाइड: कसरी यात्रा Cinque Terre द्वारा ट्रेन” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-travel-cinque-terre-train%2F – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)